Ford Mondeo 2013 - ingenye ezintsha kakhulu, stylish, ukhululekile futhi eliphezulu izimoto. Design Its okuqinile ikhanga izintatheli sidideke ukuthi ngubani cishe akusho ukumela sedan obusha ngaleyo ndlela. Umniningwane obalulekile yilona Mondeo Izinsimbi e isitayela Aston Martin. Kuboniswa izinto ezintsha kwakufanele nomthelela umphakathi futhi labo abangase babe abathengi inqume ukuhlola imodeli ngokuningiliziwe lokho okwenzeka. New Ford Mondeo futhi abaseRussia unesithakazelo, futhi lokhu kuyisinyathelo sokuqala endleleni eya empumelelweni.
Kodwa lokho ethakazelisayo alandelayo Ford Mondeo? Wakwazi kanjani zidonse ukunaka kwanoma umbukiso? Kuyiqiniso ukuthi izinguquko ezinkulu kanye nomklamo yimpumelelo. Abaklami alalelwa Umklamo umzimba, futhi umzamo wabo kwavuzwa. Ngakho-ke, singasho ngokuqiniseka ukuthi sedan ekhangayo okufana kuyinto amathemba ngempela elikhanyayo.
Ngaphezu kwalokho, Ford Mondeo 2013 lifaneleka isikhundla ingxenye. Kodwa kuyangabazeka noma Sedan American kuzothatha kwasekuqaleni, ngoba Toyota Camry kuyinto bayindlala kakhulu phakathi abacebile. Lezi amaklayenti ngeke kushintshe imoto Japanese on the "Yabantu" Mondeo. Iqiniso lokuthi eyeqisayo ukusho isithunzi Ford izimoto, futhi ngenxa yalokho akubona njalo umphathi phezulu uzokwazi ukushintshanisa Toyota zabo eziqinile futhi eziqinile nge Mondeo yesimanje futhi yempucuko.
Salon Ford Mondeo 2013 ngonyaka - kukhombisa Ingaphandle yayo. Custom imiklamo, ukunakekela ikhwalithi izinto futhi ingaphakathi ejwayelekile - yilokhu libonakala nathi olusha ibhizinisi sedan. Nokho, le moto ine ngempela ingaphakathi ezithakazelisayo, elihlanganisa izici ukuvelela isitayela. Ngokwesibonelo, isondo ezemidlalo eziqondisa kuqinisekisa angajwayelekile umhlobiso ingaphakathi. Akukona ngempela njengenjwayelo, ngoba imoto ibhizinisi ekilasini akukwazi osemusha.
Umthengi esemqoka yalolu sedan - kumuntu ocebile futhi avuthiwe sifuna ukugcizelela isimo sabo. Kuze kube yimanje, wayekhetha imoto okuqinile, eqolo futhi zikanokusho. Kodwa nge Ford Mondeo ngo-2013, izinto zase zishintshile. ngokukhuluma ngokungagwegwesi, lokhu sedan yakhelwe amakhasimende ephapheme futhi yimpumelelo ukwenza ibhizinisi noma abasebenza izikhundla umugqa. Kungaba eyingqabavu yokuthengisa abaphathi, ezimali, program, futhi onjiniyela. Kodwa nanku noyimenenja akunakwenzeka ukuba makudle Ford Mondeo.
Uma ubheka Sedan kuvuselelwe iphuzu lobuchwepheshe umbono, singabona okungenani izinguquko ezinkulu. Ngokwesibonelo, kwakukhona iyunithi ezintathu cylinder wohlu izinjini. Injini ibanga, zikhona 240-amahhashi injini, zenzelwe ephezulu ekupheleni version of the Ford Mondeo. Imininingwane ye ezimbili-litre yoPhiko ngesikhathi eziphambili kakhulu Volkswagen futhi Audi izinjini. Ngakho, ngisho nabantu abanamandla-American sedan okufushane Uzodla fuel kancane.
Manje sibheke izibuyekezo. Ford Mondeo isizukulwane esedlule bekulokhu imoto ethandwa, futhi Sedan entsha akunakwenzeka ukulahlekelwa phansi. Ngaphezu kwalokho, it kunezinzuzo eziningi azosiza ke ziye zaba ngomunye wemikhakha abaholi ingxenye yayo.
Kungani phambi-wheel drive?
Sibutsetelo evenini Japanese "Mitsubishi Grandis"
Labuh - ubani lo? incazelo lucebe futhi inkolelo-mbono yokuziphendukela umsuka amazwi